Window လေးက တက်မလာပဲ ဒီနားတင် တဝဲလည်လည်ဖြစ်နေလို့
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Window Problems » Window လေးက တက်မလာပဲ ဒီနားတင် တဝဲလည်လည်ဖြစ်နေလို့
1 Window လေးက တက်မလာပဲ ဒီနားတင် တဝဲလည်လည်ဖြစ်နေလို့ on 29th April 2011, 9:52 am
window က ဖွင့်လိုက်ရင်တော့ပုံမှန်ပဲ အတုံးလေးပြေးနေတယ်....။
ပြီတော့တက်မလာတော့ဘူး။ အစပြန်ရောက်သွားနေလို့ပါ။ ၀င်းဒိုးအသစ်ပြန်မတင်ချင်လို့ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီစက်က ACE Software သုံးထားလို့ပါ ။ အဲဒီဆော့ဝဲပြန်တင်ဖို့အဆင်မပြေလို့ပါဗျာ။ Window XP SP2 Ver: 2002 ပါ။ စက်သုံးတဲ့ကောင်က လျှောက်ကလိရင်းဖြစ်သွားတာပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး သိတဲလူများကူညီပေးပါဥိးခင်ဗျာ။ အရေးကြီးလို့ပါ။
2 Re: Window လေးက တက်မလာပဲ ဒီနားတင် တဝဲလည်လည်ဖြစ်နေလို့ on 29th April 2011, 4:08 pm
Hiren နဲ့ Boot တက်ပြီးတော့ စက်ကို Restore လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
3 Re: Window လေးက တက်မလာပဲ ဒီနားတင် တဝဲလည်လည်ဖြစ်နေလို့ on 1st May 2011, 12:43 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2011-03-02
windows အခွေနဲ့ repair ပြန်လုပ်တာကျနော်မှာတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ဗျ...
4 Re: Window လေးက တက်မလာပဲ ဒီနားတင် တဝဲလည်လည်ဖြစ်နေလို့ on 19th May 2011, 8:15 pm
့hard disk ကို bad sectors စစ််ကြည့်လိုက်ပါလားဗျ ။
အဲ့ဒါဆ်ိုပြန်ကောင်းရင် ကောင်းသွားနိုင်တယ် ။ hard disk မှာ bad sectors ဖြစ်နေရင်လည်း
အဲ့လို လည်လည်သွားရင် bad sectors ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် ဆရာသမား
bad sectors စစ်ပြီးရင် ပြန်ကောင်းသွားနိုင်တယ် ။
အဆင်မပြေသေးရင်လည်း ထပ်ပြောပေါ့နော် ။
5 Re: Window လေးက တက်မလာပဲ ဒီနားတင် တဝဲလည်လည်ဖြစ်နေလို့ on 5th June 2011, 10:29 am
ဒီနေ ရာမှာဘဲ မေးတော့မယ်ဗျာ....ကျတော် window တစ်ခုတင်တာ....error ဖြစ်နေလို့ပါ....
cd နှင့် boot...တက်လိုက်ရင်....using the original setup CD-ROM.........Select 'r´at the first screen to start repair.....ဆို ပြီး တက်တက်လာတယ်ဗျာ.....ဘာလုပ်ရမှန်း ကိုမသိတော့ဘူး ....နည်းနည်းလောက်..ကူညီကြပါဦး...ဗျာ....
6 Re: Window လေးက တက်မလာပဲ ဒီနားတင် တဝဲလည်လည်ဖြစ်နေလို့ on 28th June 2011, 3:10 pm
တည်နေရာ : သာေပါင္းၾကီးေက်းရြာ၊ ညာစားၾကီးျမိဳ့နယ္
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-06-19
အဲလိုမျိုးတွေကြုံတိုင်း ကျွန်တော် ကတော့ Hiren Boot CD သုံးတယ်ဗျ ။ CD အခေ ွမကောင်းရင်လဲ ဖြစ်တက်သလို CD-ROM သိပ်မကောင်းတော.ရင်လဲ ၀င်းဒိုးတင်တဲ.ခါ တဝဲလည်လညိတွေဖြစ်တက်ပါတယ် ။ Hiren နဲ.Boot တက်မယ်ပြီးတော. နဲနဲပါးပါးကလိလိုက် မယ် အခွေ ပြောင်းပြီးတင်ကြည်.မယ် ။ ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရင် အဲလိုမျိုးတွေ လုပ်မိမှာပဲ ။
အဆင်ပြေပါစေဗျား ။ အိုကေသွားရင်လဲ ဘယ်လိုရသွားလဲဆိုတာ ပြန်ပြောပေးရင်တော. အတိုင်းထက်အလွန်ပဲနော်. ။
7 Re: Window လေးက တက်မလာပဲ ဒီနားတင် တဝဲလည်လည်ဖြစ်နေလို့ on 29th June 2011, 11:50 am
အခုတော့ အဆင်ပြေသွားပြီဗျာ.....နည်းနည်းကလိ လိုက်တာ....
8 Re: Window လေးက တက်မလာပဲ ဒီနားတင် တဝဲလည်လည်ဖြစ်နေလို့